UBheki Mkhwane – The Ulwazi Programme
Wazalwa ngo-1963 wakhulela KwaMashu, uBheki Mkhwane uzakhele udomo ngeshashalazi njengomqondisi, uphrojusa, umbhali wemidlalo yezokulingisa nomlingisi. UMkhwane wabanothando lokulingisa esemncane. Ngekhono elingandile alinikwe uNkulunkulu ngebhola likanobhutshuzwayo, abaningi babecabanga ukuthi uzophelela enkundleni njengomdlali webhola elikhokhelwayo, kepha isiphetho sakhe kwakuwukujabulisa abantu.
Ngesikhathi esebenza njengonogada futhi kamuva njengomabhalane othunyelwe, uBheki wasebenza ngesikhathi sakhe sokuphumula kwi-Durban Community Arts Project. Ngo-1986 wajoyina i-Loft Theatre Company lapho asebenza khona iminyaka emine nakwimikhiqizo engu-16, okubalwa kuyo i-Izigi Ziyasondela; Kwamanzi; Anthony and Cleopatra; Superbike; Richard 111, Mujaji kanye ne- Master Harold and the Boys, lapho awina khona i-Vita Award as Best Supporting Actor ngokudlala indima ka-Willie ngonyaka ka-1989.
UBheki wayengumsunguli futhi eyilungale-Theatre for Africa waphefoma ngo- 1990 emdlalweni i-Horn of Sorrow and Eagle, wahambela ezindaweni ezimbili i- United Kingdom, wawina i-Scotsman First Awards e-Edinburgh Festival. Wavela kufilimu i-The Angel, The Bicycle and the Chinaman’s Finger eyayiqondiswa u Katinka Heyns, futhi ulingise emidlalweni eminingu kumabinakude engumlingisi oqavile, kubalwa iKhululeka kanye ne-Motsamai. Uke wavela naku- Strike it Lucky kanye ne Zama-Zama.
UBheki uyinkunqa yemidlalo yaseshashalazini nqobo lwakhe, ehambisa izethameli eziya ehlathini lase-Afrika ngokunyakaza nemisindo yakhe emangalisayo, edalwe engenalutho ngaphandle kwezinti ezimbalwa nebhakede noma ezimbili! Njengomlingisi wasebenza ndawonye no-Ellis Pearson iminyaka engu-15 babenothando lweshashalazi bobabili. Ungumculi ovelele okwazi ukulingisa, ukucula nokudansa. Ebusheni bakhe wasungula amaqembu emidlalo yaseshashalazini , ngesikhathi ehlangana no-Ellis, wayesengumdlali onekhono, onothando futhi onamandla. Inhlanganisela kaBheki yokuba nguMzulu kanye neyasedolobheni iTheku kumenza athandeke kubo bonke abahlangana naye.
Ngokuhamba kweminyaka ithalente likaBheki selikhulile futhi manje akasebenzi nje njengomlingisi kuphela, kodwa futhi usebenza njengomqondisi, umsunguli, noNtuthuko Khuzwayo nabanye, benkampani ezinze KwaZuluNatali, i-Just In Time, i-theatre trust uzibophezele ekuthuthukiseni nasekumeleni itiyetha yomdabu. I-Just in Time ihlose ukuqeqesha abasebenza emidlalweni yeshashalazi, bakhiqize imidlalo yaseshashalazini entsha yaseNingizimu Afrika, baqoqe izimali zokuthuthukisa nokwenza imidlalo, nokwenza uhlelo lokuvakasha lomsebenzi womdabu. Umbono wetrasti wukudala futhi kwenziwe izigaba zokukhiqizwa kwezilimi zomdabu zaseNingizimu Afrika ezahlukahlukene nokukhuthaza ukubhala okusha nokusha kanye nokuhumusha imibhalo esezingeni eseyikhona ezilimini zomdabu zaseNingizimu Afrika. Inhloso ukuhlinzeka ngendawo esimeme ukuze kwenziwe umsebenzi omusha futhi uhlelwe.
Akusikhona kodwa ukuphefoma kukabBheki okujabulisayo kuphela, kodwa nomsebenzi wakhe unenjongo futhi uhambelana nezindawo. UBheki usungule futhi waqondise i-Sitting Around the Fire , umdlalo oveza izigcawu eziningi ezibucayi eziphatha kabuhlungu futhi ezisikhumbuza ngodlame oluhlasele iNingizimu Afrika endleleni yayo eya entandweni yeningi, ingasaphathwa eyoke ibe khona umkhuba wama-vendettas weqembu nokujezisa I-Sitting Around the Fire iwine indondo ye-Standard Bank Ovation Award e-Grahamstown Festival ngo-2010.
UBheki ubuye wathola nethuba lokuqeqesha indodana yakhe, uMenzi Mkhwane, kanti bobabili bacule ndawonye ku “ Belly of the Beast ”. UMenzi usengumlingisi osezingeni eliphezulu futhi ngokubambisana noSabelo Ndlovu basungula inkampani yaseshashalazini yaseThekwini, i Nu Breed. I-Nu Breed ikhiqize umsebenzi waseshashalazini onempumelelo ezweni lonke.
Ngesikhathi uBheki Mkhwane ehamba neKwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra (KZNPO), i-soloists uLinda Bukhosini, uBongani Tembe, uSally Silver kanye nezinhlangano zamakhwaya ze-Durban Serenade kanye ne-Imilonji KaNtu ezinze eSoweto ukujabulisa izethameli zase-Barbican e-United Kingdom. UBheki usebenze nenkampani yezokuvakasha enamandla evela eNingizimu Afrika ngokuhlanganyela ne-London Symphony Orchestra (LSO) yaseBrithani e-Barbican.
Waqokwa njengomxhumanisi weshashalazi e-BAT Centre, okuwukuhlonishwa kwethalente lakhe nomusa ekusizeni abalingisi abasebasha ukuba bathuthukise amakhono abo emidlalo yeshashalazi. Wathi:
“Ukuba ngusaziwayo akuyona into umuntu okufanele ayilangazelele, ngesikhathi ungusaziwayo, uma unokuzikhukhumeza ikhono lokulingisa liyaphela Ngiyisisebenzi, ubuciko bokulingisa ngabunikwa oNkulunkulu base-Afrika futhi kungumsebenzi wami ukufundisa labo abeza ngemuva kwami. Impilo ibhande lomtshelekwane zonke isizukulwane kumele sifunde futhi sidluliseumsebenzi omuhle hhayi ukusebenzela emuva. ”
Waziwa kakhulu kubabukeli bethelevishini ngendima yakhe yokulingisa njengoSamson, inhloko yesizwe sakwaNdlovu esihambisana nomfowabo onekhanda elishisayo, uMandla (odlalwa nguBongani Gumede), kuMzansi Magic telenovela-turned-soap-opera, Isibaya. UBheki waqokwa ohlwini lwe-Outstanding Male Villain (Royalty Soapie Awards 2013).
Kwaphela iminyaka engaphezu kwengu-28 uBheki enqaba izindima kuthelevishini njengoba ebona ukuthi le mibukiso yayingeyona inkomba yezimpilo zabantu baseNingizimu Afrika. UBheki uthi ubengeke azihlanganise nezindaba ebezikhulunywa kuthelevishini. Kube kuphela lapho u-Angus Gibson (umqondisi we Isibaya ) eza kuye ukuze abe ngomunye wabahola ohlelweni lapho athatha isinqumo sokugcina anikezele khona njengoba udaba lwendaba lwaluyinkomba yangempela zomphakathi wethu. Uyanezela ukuthi lesi yisona sizathu esifanayo anqume ukulingisa ku Uzalo. Ku-Uzalo, ababukeli babona uhlangothi olwehlukile lukaBheki njengoba wayevezwa njengomfundisi ozama ukuqala isonto elinomusa endaweni yangakubo.
Categories People Tags Bheki Mkhwane, isibaya, Uzalo